Fandaharana hamoronana horonan-tsary mahafinaritra hahombiazanao | Famoronana an-tserasera
Androany, ny horonan-tsary dia iray amin'ireo fomba fifampiresahana. Lasa ny bilaogy, ny lahatsoratra ary ny sary. Ny zava-baovao, izay efa nandeha nandritra ny taona vitsivitsy izao, dia ireo sary mampihetsi-po azonao soratana, na amin'ny telefaona finday na miaraka amin'ny fitaovana matihanina. Ny olana dia rehefa avy eo dia mila mampiasa programa ianao hamoronana horonantsary manara-penitra ary eo no mety hahalasa very anao kely.
Ka noho izany, rehefa mampakatra ny zavatra noforoninao tao amin'ny YouTube, Daily na sehatra hafa misy ny horonan-tsary dia misy kalitao tsara sy matihanina araka izay azo atao, eto ambany isika dia hiresaka momba ny programa hamoronana horonan-tsary. Noho izany, na tetikasa izany na manome fiainana ny fantsona iray, dia ho azonao antoka fa tonga lafatra izy io ary manome ny sary tianao hampitana azy.
1 Inona no tokony ho ao an-tsaina rehefa mamorona horonantsary
1.1 Miezaha manao horonantsary misy kalitao
1.2 Hatsarao ny lahatsoratra
1.3 Mitandrema amin'ny sary
1.4 Fandaharana hamoronana horonan-tsary: ​​ireo no tsara indrindra
1.5 Fandaharana hamoronana horonan-tsary: ​​Avidemux
1.7 Fandaharana hamoronana horonan-tsary: ​​Adobe After Effects
1.9 Fandaharana famoronana horonantsary: ​​Avid Media Composer
1.11 Fandaharana hamoronana horonan-tsary: ​​Sony Vegas Pro
1.12 Fandaharana hamoronana horonan-tsary: ​​Filmora
Inona no tokony ho ao an-tsaina rehefa mamorona horonantsary
Raha mpamorona endrika na youtuber ianao, dia fantatrao fa ny fanaovana horonan-tsary manintona sy vita tsara dia hanampy anao hametraka ny mpanaraka. Eny, ankoatr'izay manampy kalitao amin'ny hafatrao ianao ary manao zavatra tian'ny olona an'arivony, mbola betsaka kokoa. Fa inona no tokony ho ao an-tsainao mba hamoronana horonan-tsary?
Miezaha manao horonantsary misy kalitao
Izany hoe, miezaha tsy hanetsiketsika ny fakantsary, izany aza ahetsika haingana loatra (Izy io dia afaka mahasosotra an'izay mahita azy) ary maranitra ampy hanavahana azy. Midika izany fa tokony hikarakara ny fitoniana, ny jiro ary ny lafiny rehetra izay misy fiantraikany amin'ny zavatra noraketinao ianao.
Vantany vao vitanao izany dia andramo jerena, hataonao hatramin'ny farany ve sa misy zavatra tsy tianao? Mila manandrana ianao fa misy zavatra mihena sy mihabe izay tsy tianao.
Hatsarao ny lahatsoratra
Na voaresaka na an-tsoratra, ny tadiavinao dia ireo izay mahita anao mahatakatra anao, marina? Noho izany, tsy maintsy hainao ny mamoaka feo, miteny miadana ary ambonin'izany dia samy mampiasa ny vatanao sy ny fiteninao.
Raha manampy lahatsoratra an-tsoratra amin'ny horonan-tsary koa ianao, hikarakara tsara ny lesoka amin'ny tsipelina satria afaka mamorona horonantsary manana kalitao ianao.
Mitandrema amin'ny sary
Raha miditra sary ianao, alao antoka fa tsy mivoaka pixelated ireo (mazàna satria kely dia kely izy ireo ary ao anaty horonan-tsary dia mihinjitra). Miezaha hanana kalitao, ho tsara tarehy izy ireo ary mandeha araka ny horonantsary izay ho noforoninao.
Fandaharana hamoronana horonan-tsary: ​​ireo no tsara indrindra
Ankehitriny rehefa jerenao ireo andinindininy kely izay efa noresahintsika teo aloha, fotoana tokony hieritreretana izay programa hamoronana horonan-tsary azonao ampiasaina. Mino izany na tsia, misy safidy maro, na maimaim-poana izany na karama. Noho izany izahay dia nanao safidin'ireto sasantsasany tamin'izy ireo mba hahafahanao misafidy izay tianao indrindra. Ataovy?
Fandaharana hamoronana horonan-tsary: ​​Avidemux
Avidemux dia mpamoaka horonantsary malaza indrindra, ary iray amin'ireo mpampiasa be mpampiasa indrindra. Ny tsara indrindra dia maimaim-poana izany ary, ho fanampin'izany, tohanana izy na manana Windows, Linux, Mac ...
Mamela anao? Eny, amin'ny ambaratonga fototra, ampio ny horonan-tsary ary apetaho eo io ny làlan'ny feo na koa horonantsary mifandimby misy sary, mba tsy ilay horonan-tsary noraketinao ihany. Na azonao atao aza ny manao azy avy hatrany am-boalohany, mamorona horonan-tsary misy sary, soratra, sns.
Raha ny fitehirizana ilay horonantsary dia hamela anao hanao azy amin'ny AVI, MP4 na MKV.
Ity programa fanovana horonantsary ity dia avy amin'ny Apple, ary amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo fampiasan'ny matihanina indrindra. Manana a tena interface interface intuitive ary mora ampiasaina miaraka aminy Ary ny zavatra tsara indrindra dia ny miasa amin'ny fahitana, izany hoe ho hitanao miaraka amin'izay ny fizotrany sy ny vokany.
Manana olana iray fotsiny izy ary ny rafitra fiasan'izy ireo dia Mac, tsy misy ho an'ny hafa toy ny Windows na Linux.
Fandaharana hamoronana horonan-tsary: ​​Adobe After Effects
Loharano: apps ho an'ny sary
Tsy maimaimpoana ity programa ity. An'i Adobe Premiere Pro io. Ary tsy afaka milaza izahay fa mora ampiasaina ihany koa; ny tena marina dia tsy izy, mila ambaratonga avo lenta amin'ny siansa informatika (sy programa video). Na dia miaraka amina fampianarana, sy mandany fotoana be dia be aza ianao, dia mety hahazo zavatra tsy mampino.
Ny zavatra tsara indrindra momba ny programa dia izany mamela anao hamorona sarimiaina, sary 3D, fihetsehana ary vokany. Ny valiny dia horonantsary tena tsara kalitao (raha manokana fotoana ianao), matihanina ary hisy vokany izany.
Mazava ho azy fa mifantoka bebe kokoa amin'ny tetik'asa izy io fa tsy amin'ny fantsom-pandefasana horonantsary (satria satria mila fotoana bebe kokoa hamoronana azy io dia tsy azonao atao ny mampakatra ireo horonan-tsary tianao rehetra.
Amin'ireo programa hamoronana horonan-tsary, ity dia iray amin'ireo tsotra indrindra sy haingana indrindra. Mamela anao hamorona horonan-tsary mifototra amin'ny maodely efa voafaritra mialoha (na amboary avy amin'ny rangotra). Ary karazana video inona? Eny, izy ireo dia mety ho sary mihetsika, tantara ho an'ny Instagram, horonan-tsary hanaovana fampidirana horonan-tsary, ho an'ny fampisehoana demo, ny tranofiara sns
Azonao atao koa ny manampy audio ho azy satria manana tranomboky misy sombiny maimaim-poana izay hanampy anao hanatsara ny horonan-tsarinao.
Fandaharana famoronana horonantsary: ​​Avid Media Composer
Manohy amin'ny fandaharana hamoronana horonantsary amin'ny sehatra matihanina, manana ny Avid Media Composer ianao. A mpamoaka horonantsary izay mihaino hatrany ary misy fiatraikany amin'ny feo, feo ary plugins izay manome fikitika manokana an'ilay horonantsary tianao hamboarina.
Ny hany zavatra ratsy momba azy dia ny hoe tsy afaka 100%. Izy io dia manana kinova maimaimpoana, izay tena voafetra; ary fandoavam-bola hafa izay mety mitentina 25 euro isam-bolana.
Manana izany ho an'ny Mac sy Windows ianao (tsy manohana azy ny Linux).
Iray amin'ireo programa hamoronana horonan-tsary izay atolotray ny AVS. Manana olana izy, ary izany dia amin'ny Windows ihany no misy azy, fa maimaim-poana. Amin'izany ianao dia afaka manapaka, mizara horonan-tsary, manodina sary ...
hita maso mitovy amin'ny Windows Movie Maker, ary ny fomba fiasan'izy ireo dia tena mitovy, koa raha toa ianao ka triatra amin'ity programa ity, dia hanana valiny mitovy amin'izany.
Ankehitriny koa dia mamela ny horonantsary hifanaraka amin'ny endrika samihafa (tsy ho an'ny solosaina ihany, fa ho an'ny telefaona finday, na ny fampidinana ireo lampihazo an-tserasera).
Fandaharana hamoronana horonan-tsary: ​​Sony Vegas Pro
Ity dia iray amin'ireo programa famoronana horonantsary matihanina indrindra, ary ho an'ireo mpampiasa mandroso, fantatry ny maro izay miasa miaraka amin'ny horonan-tsary. Izy io dia manana interface iray azo namboarina saingy tsy mora ny miara-miasa raha vao manomboka ianao. Na izany aza, Izy io dia manana ny kinova Movie Studio ho an'ireo maniry hianatra ny fampiasana azy.
Izy io dia iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena amin'ny famoronana horonantsary ary tsy misy afa-tsy amin'ny Windows.
Fandaharana hamoronana horonan-tsary: ​​Filmora
Filmora dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny tontolon'ny audiovisual, ary tsy fandaharana fotsiny ny mamorona horonan-tsary, fa azonao atao koa ny manambatra, mizara, manapaka ... Raha fintinina dia hanao zavatra mahafinaritra miaraka aminy ianao. Izy io dia manana sivana maromaro, ary koa effets visuels ary afaka manampy sary mihetsika ianao. Ny miampy izay tsy ananan'ny programa hafa dia ny fahaizana manafoana ny tabataba, ny mahita ireo zoro ...
Maimaimpoana izy io, na dia misy dikanteny aloa aza izay ahafahanao manana loharano an'arivony maro hanovana. Tsy mifanaraka amin'ny rafitra Windows sy Mac ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Fandaharana hamoronana horonan-tsary